के हो बिटकोइन जसमा लगानीकर्ताले हजार लगानी गरेर करोडौंको मालिक बने | Nepal Desh
Home अर्थ के हो बिटकोइन जसमा लगानीकर्ताले हजार लगानी गरेर करोडौंको मालिक बने
१४ मंसिर, काठमाडौं । भर्चुअल मुद्रा बिटकोइन सुरु भएको आठ वर्ष पुगेको छ तर यसको मूल्य चमत्कारिक रुपले बढिरहेको छ । यसमा केही हजार डलर लगानी गर्नेले अहिले करोडौं डलर कमाइसकेका छन् । विटकोइन अवैधानिक भएको पिरामिड शैलीको गोल्डकोस्ट प्रकृतिको रहेको भनी विश्वका नामी वित्तीय संस्थाले बताइरहे पनि यसको आकर्षण बढिरहेको छ । यसको आकर्षण र मूल्य असिमित रुपमा बढ्नुको कारण के हो भनी विश्वको ध्यान यतैतिर खिचिएको छ । वित्तिय संस्थाहरुले यसको कुनै भविष्य छैन भनिरहे तापनि यसको मूल्य भने आकासिँदो छ ।
सन् २०१७ को ११ महिनामा एक बिटकोइनको मूल्य लगभग १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षअघि बिटकोइनको मूल्य ७५३ डलर थियो । यो हिसाबले यसको मूल्य एक वर्षमा लगभग १३ सय प्रतिशत वृद्धि भइसकेको छ ।
युरोपेली मुलुक लक्जम्बर्गमा भएको बिटकोइन एक्सचेन्जका अनुसार, बिटकोइनले यस वर्ष आफ्नो यात्रा एक हजार डलरबाट शुरु गरेको थियो । सन् २००९ मा शुरु गरिएको बिटकोइनको मूल्यमा भारी उतारचढाव आइरहन्छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने मुद्राको अस्तित्व हुने अनि त्यसको भाउ दिनदिनै बढ्दै जाने कसरी सम्भव हुन्छ ? जानकारहरूका लागि यो प्रश्नको जवाफमा अर्को प्रश्न पनि लुकेको छ : आखिर बिटकोइनमा कसको लगानी भैरहेको छ ?
सर्च फर्म अटोनोमस नेक्स्टले यसलाई पत्ता लगाउन खोज्यो । यसका पछाडि हेज फन्ड्सको हात रहेको उसको दावी छ । हेज फन्ड्सले शेयर किन्छ र फाइदामा बेच्छ । यी फन्डहरूले बिटकोइनमा पनि यसै गर्छन् ।
वित्तविश्लेषक बिलेलोले सात वर्षअघि कसैले बिटकोइनमा १० हजार डलर लगानी गरेको भए आज त्यसको मूल्य बढेर ११० करोड डलर पुगेको बताएका छन् ।
बिटकोइन एक भर्चुअल मुद्रा हो र यसमा कुनै सरकारी नियन्त्रण छैन । यो बिटकोइन गोप्य मुद्रा हो र यसलाई सरकारबाट लुकाएर राख्न सकिन्छ ।
बिटकोइन एक भर्चुअल मुद्रा हो र त्यसमा कुनै सरकारी नियन्त्रण छैन । यस मुद्रालाई कुनै पनि बैंकले जारी गरेको होइन । यो कुनै पनि देशको मुद्रा नभएकोले यसमा कर पनि लाग्दैन । बिटकोइन गोप्य मुद्रा हो र यसलाई सरकारबाट लुकाएर राख्न सकिन्छ ।
यसलाई संसारमा कतै पनि सिधै किन्न र बेच्न सकिन्छ । शुरुवातमा कम्युटरमा धेरै जटिल कार्य गरेपछि यो क्रिप्टोकरेन्सी कमाइन्थ्यो ।
बिटकोइन हासिल गर्ने तीन मुख्य तरिका छन् । असली पैसाले किन्ने, उत्पादन र सेवाको साटो बिटकोइनमा भुक्तानी गरेर र आफ्नै भर्चुअल मुद्रा भएको नयाँ कम्पनीको माध्यमले यो हासिल गर्न सकिन्छ ।
सन् २००९ मा सातोशी नाकामोतो नामक जापानी समूहले संसारसामु बिटकोइन पेश गरेको थियो । संसारमा अहिले ७०० भन्दा बढी भर्चुअल मुद्रा इन्टरनेटबाट सञ्चालित भइरहेका छन् । नयाँनयाँ कम्पनीहरूले दिनदिनै भर्चुअल मुद्रा लिएर आइरहेका छन् ।
भर्चुअल मुद्राको प्रमुख सिद्धान्त भनेको यसको कारोबार संसारको कुनै पनि कुनामा बसीबसी इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । लेनदेन एक्सचेन्ज फर्ममार्फत हुन्छ ।
बिटकोइनमा गिरावट आउन पनि सक्छ
बटकोइनप्रति अहिलेको आकर्षण हेर्दा यसमा गिरावट आउन सक्ने देखिँदैन । तर हेज फन्डहरूले अचानक पैसा फिर्ता लिए भने यस गिरावट पनि आउन सक्ने सम्भावना छ।
अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो बैंक जेपी मोर्गन चेजका सीईओ जेमी डिमोन र प्रसिद्ध लगानीकर्ता वारेन बफेले बिटकोइनलाई फर्जी मुद्रा भने छन् । विश्वका बैंकहरुका लागि बिटकोइन चुनौति बन्दै गएको छ । दुनियाको आकर्षण बढ्दै गरेको बिटकोइनलाई कसरी बैंकिङ कारोबारमा ल्याएर नाफा सकिन्छ भनी विश्वका ठूला बैंकहरु समेत यसको कसरतमा लागेका छन् ।